musha nyika dzakabatana Comedians Steve Harvey Mwana WeChidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaSteve Harvey inokuudza Chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mudzimai, Vana, Net Kukosha, Lifestyle uye Hupenyu Hwega.
Zvichitaurwa zviri nyore, tinoongorora nhoroondo yemuseki weAmerica, muterevhizheni, mushamarari uye munyori. ChildhoodBiography inokuudza zviitiko zvinozivikanwa kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakazove Akakurumbira.
Ehe, pamwe wakamuisa mune yako runyorwa rwe Vakakurumbira Comedians vanobva kuUnited States. Nekudaro, vashoma chete vevateveri vake (kusanganisira iwe) vakatora nguva kuti vaone Steve Harvey's Bio yatakagadzirira. Huya neni, apo patinoona zvakawanda nezveiye American comedian.
Nyaya yaSteve Harvey yehucheche:
Kune kutanga, mazita ake akazara ndiBroderick Stephen Harvey. The US comedian akaberekwa musi wegumi nemana waJanuary 17 kuna amai vake, Eloise Harvey uye baba, Jesse Harvey muguta reWelch, West Virginia, United States. Steve Steve akafananidzirwa pazasi, akauya pasirese ari mudiki pavashanu (1957) Vana vanozvarwa kunze kwemubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Steve anga achiri mwana apo mhuri yake yakatamira kuCleveland, Ohio. Yaive kuCleveland iyo Steve akashandisa chikamu chikuru chehudiki hwake achikura pamwe nevakoma vake vakuru. Chikamu chemhuri hombe yeAfrica yeAmerica
Zvakare inowanzozivikanwa se "Rock uye Roll Capital yePasi" kana "Iyo North North." Cleveland, ndipo pakakurira Steve achiri mudiki asi aipota achidzokera kuWest Virginia kunopedza nguva nasekuru vake. Akaratidza imwe nhanho yekurairirwa ari mwanakomana wemudzidzisi weSunday school uye ainyatsoziva zvaaida kubva muhupenyu.
Paive panguva yake yegwaro rechitanhatu pazera ramakore 9 kuti Steve anyore pabepa kuti aida kuve paTV, Bill Cosby tisingatarise nezvekutadza kutaura kwake panguva iyoyo yehupenyu hwake. Kusarega kwake maitiro kwakaumba imwe yehupenyu hwaVaHarvey hupenyu, "Unofanirwa kurota zvakakura uye wotenda kuti uchabudirira."
Mhuri yaSteve yakanga isina zvakawanda, asi hupenyu hwavo hwanga hwakazara nekutenda kwavo. Asides achiita zvekurima zvekurima, Baba vaSteve Harvey vaive Coal Miner neProfessional apo Amai vake vaitarisira imba. Pazasi peichi chidimbu pane zvinoita Amai vaSteve.
Dzidzo yaSteve Harvey uye Basa Kuvaka-up:
Mudiki Steve haana kumborega kuda kwake kuve hunhu hwepaTV achienda kuGlenville High School mu1974 achiri kufanira kutaura achidudza mazwi. Pachikoro apa ndipo paakawana zita rake remadunhurirwa rekuti 'Va-Va-Voom' raakapihwa nevamwe vaaidzidza navo nekutadza kududza nemazvo tsamba “v” paakaedza kutaura izwi rekuti “volcano”.
Nguva pfupi yapfuura chikoro chesekondari, Steve Harvey akaenda kuKent State University asi akasara asina kudzidza nekuda kwekusaita zvakanaka mudzidzo. Pashure pacho, akaenda kuWest Virginia University. Iye inhengo yeOmega Psi Phi Fraternity inozivikanwa nekuzvipira kwayo kune yayo yemakadhi mirayiridzo yehurume, kudzidza, kutsungirira, nekusimudzira. Bill Cosby zvakare inhengo.
Steve Harvey Hupenyu Hupenyu: Hupenyu Hwake hwepakutanga
Semwana mudiki wemuAmerican American Mwana, Steve Harvey wekutanga makumi maviri aive anetsa uye azere nekushushikana, sezvaakaapedzera vachishanda mabasa akati wandei kusanganisira seinishuwarenzi mutengesi, kapeti yekuchenesa, positimeni, kunyange wannabe nyanzvi yetsiva kungowana raramo kubva ipapo zvaive zvisiri chaizvo zvaaida kuita muhupenyu.
Steve Harvey's Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Ndichiri kutengesa Inishuwarenzi, Musi wa8 Gumiguru 1985 Steve Harvey akahwina mutambo weusiku weamateur kuHilarities Comedy Club muCleveland; kirabhu yemuno yemahara muOhio. Akashandisa kuseka kwekucherechedza kubva pane zvakaitika muhupenyu hwake kutandadza vateereri vake. Akapedza makore mashoma akatevera zvakanyanya mumugwagwa achitamba mune chero kirabhu iyo yaida kumugadzirira; kumupa nzvimbo mukushongedza hunyanzvi hwake hweamhanzi.
Kukwira kwake kwekutanga pamanera kune mukurumbira kwakamutungamira kujoina uye kuhwina makwikwi makuru emakwikwi (Iyo Johnnie Walker National Comedy Kutsvaga), ichiteverwa nekumuratidzira iyo showa yeTV 'Inguva yekuratidzira kuApollo,' kusanganisira nhepfenyuro yeTV "Iyo Steve Harvey Show ”Kwaakashanda pamwe naCedric The Entertainer (1996-2002).
Pane imwe King of Comedy yekushanya, Harvey naCedric vakabatana naBernie Mac naDL Hughley pane ina-murume yekushongedza nzira yemoto uyo wakashamisa nyika yose. Muna 1999, Kings of Comedy yakava rwendo rwekupedzisira rwekuseka kusvika nhasi muUnited States, ichitora mari inopfuura mamirioni mazana maviri emadhora.
Steve Harvey's Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Gore rakatevera, Steve Harvey akazozivikanwa pawairesi yake yakabatana inonzi 'The Steve Harvey Morning Show.' Iyo showa yakave yakakurumbira zvikuru uye yakahwina akati wandei makuru maRadio mibairo.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Steve Harvey munyori anohwina mubairo uyo ane akawanda mabhuku kuchikwereti chake, wekutanga ari "Ita semukadzi, Funga Semurume" aine firimu - Funga semurume 2012 - kuseri kwechirevo chayo. ndiye zvakare mutungamiriri weakakurumbira mutambo showa "Kurwisana Kwemhuri" uye zvimwe zvakawanda zvinokurudzira zvekuratidzira.
Vamwe vose sezvavanotaura nhoroondo.
Steve Harvey Kufambidzana ndiani ?:
Steve Harvey ari muwanano yake yechitatu. Imba yake yekutanga yaive muna 1980 kuna Marcia
Harvey waakawana naye vanasikana mapatya (Brandi naKarli Harvey) uye mwanakomana
(Broderick Harvey Jr.). Muchato wakazopera muna 1994.
Makore maviri gare gare, muna 1996. Harvey akaroora Mary Shackelford. Vaviri ava vaive vakaroora kwemakore mapfumbamwe uye vaive nemwanakomana pamwe (Wynton Harvey).
Kurambana Mary Shackelford muna 2005, Harvey akatanga kufambidzana panguva iyoyo Marjorie Elaine Harvey. Iyo duo yakatanga kusangana naye mu1990 uye akasungira banga makore maviri gare gare muna 2007.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Mukadzi waSteve Harvey:
Marjorie Elaine Harvey anogadzira fashoni yemuAfrica American anonzi ane mambure
akakosha madhora makumi mashanu emamiriyoni. Marjorie Elaine Harvey akazvarwa muna Gumiguru 50. Iye akatanga kuroorwa naJim Townsend mukutanga kwema1964 iye aive kingpin drug uye aizivikanwa nekureba kwake kupindira mune mhosva.
Marjorie aive nevana vaviri (2) (Jason Harvey naMorgan Harvey) naJim uye wechitatu (Lori Harvey), aine Donnell Woods imwe kingpin yezvinodhaka. Vana ava vakazoitwa naSteve Harvey vachiita Steve Harvey baba veVanomwe (7) Vana.
Zvizhinji Nezve Vana vaSteve Harvey:
Zvinokufadza iwe kuziva kuti aisangova Steve Harvey baba veVanomwe (7) Vana, iye zvakare ana Vana (4) Grand Vana. Ngatitarisei vana vake. Brandi Harvey uyo mapatya kuna Karli anokurudzira Mutauri, Chief Change Mugadziri uye Executive Director veSteve neMarjorie Foundation ukuwo Karli achive mutauri weveruzhinji akaroora neMwanakomana. Broderick Harvey Jr. ndiye Mwanakomana wekutanga waSteve uye ane yake yekupfeka tambo.
Morgan Hawthorne munhu ane hunyanzvi mushambadzi, mudikani, mudzimai anodada (akaroora mukomana wake mudiwa, Kareem Hawthorne, nyanzvi inozivikanwa saDJ Bruckup, muna 2013). Iye zvakare amai mumwanasikana wavo, Elle.
Muna 2015, Jason; Steve's Step-Son akatanga kambani yepamusoro yevakadzi shangu. Iye ivakaroora Model Moder, uye mubatanidzwa wavo wakaburitsa kune vatatu (3) vana vanodakadza, Noah, Rose naEzra (mudiki kuna Steve Mwanakomana waSteve). Wynton mutori wemifananidzo uye zvakare anofarira fashoni. Mudiki wekupedzisira waSteve, Lori muAmerican modhi uye inozivikanwa internet internet. Akambove naSean "Diddy" Combs semukomana wake.
Hupenyu hwemhuri hwaSteve Harvey:
Kwenguva yakati zvino, Steve Harvey aisazombotaura nezve budiriro yake pasina kutaurwa nezvemupiro wakakura wemhuri yake; kunyanya iya yaamai nababa vake. "Baba vangu vaigara vari mutsigiri wangu mukuru" sezvaanogara achitaura uye
“Zvese zvimwe zvandakaenda, imhaka yekuti Eloise Vera Harvey akandidzidzisa nezveRudo rwe
Mwari nekuremekedzwa kwevanhu ”. Tsvaga chokwadi nezve nhengo dzemhuri yaSteve Harvey pazasi.
Zvimwe pamusoro pababa vaSteve Harvey:
Jesse Harvey aive baba vaSteve Harvey. Aive mucheri wemarasha nehunyanzvi uye aive mutsigiri akakura wechiroto chaSteve Harvey chekuve paTV. Jesse Harvey akambomuraira kuti anyore kurota kwake paPepa uye ariverenge mangwanani oga oga asati aenda kuchikoro uye manheru ega ega asati arara. Steve aifarira Baba vake zvekuti anotaura saiye. zvinosuwisa, Baba vaSteve vakafa muna 2000 nekuda kwechirwere chemapapu chevatema pazera remakore makumi masere nemasere.
Zvimwe pamusoro paamai vaSteve Harvey:
Amai vaSteve vaive Eloise Vera Harvey. Iye akazvarwa mu1915 semwana wechitatu pakati pegumi
(10) vana. Aive mudzidzisi weSunday School uye ari munhu kuTrinidad Church.
Steve aigarogarisana zvakanyanya naAmai Vake uye aichengetedza kushaiwa kwake
chakavanzika panguva, kuti asamunetseka. Eloise Vera akafa nesitiroko apo
Steve aive wemakore makumi mana (40) ezera muna 1997.
Nezve hama dzaSteve Harvey:
Kuve wechidiki pakati pevakoma vake, Steve Harvey aive nemukana wekudzidza zvishoma zvidzidzo kubva muhupenyu zvakaitika kune vakuru vake izvo zvakanyanya kubatsira mukuvaka hunhu hwake. Vanun'una vake vanosanganisira Terry Harvey, Ramona Harvey kazhinji anodaidza Mona Harvey naPauline Harvey.
Ramona anozivikanwa nebasa rake rakazvitsaurira seMutungamiriri weUsher Board
Ministry kuCleveland Church yaChristian Citadel yeTariro Ministries kwemakore makumi mashanu.
Hazvisi zvakawanda hazvizivikanwe nezve Forth (4th) siblings.
Steve Harvey ane hama dzinoverengeka dzavanosanganisira Thomas Miles anowanzoidzwa kunzi "Muzukuru Tommy" naEl vaive muzukuru wake. Andrena Brown zvakare hama yake. Muzukuru Tommy aivewo Comedian, mutambi uye mugadziri.
Hupenyu hwepamoyo hwaSteve Harvey:
Haven yaita zvakanaka kugovana Steve Harvey yekufambidzana uye nyaya yehucheche, kusanganisira chokwadi
kutenderedza kukwira kwake kune mukurumbira uye kumashure kwemhuri; ngatitarisei hunhu hwake kunze
komesi uye TV Shows.
Akasviba brown-eyed Steve, anonakidzwa nedowntime yake yekupfura dhayi, kuredza uye ane shungu yakasimba yekupa zano vadiki nenherera. Utatu hwake hwakafanana nehwevanhu vakazvarwa pasi pechiratidzo cheCapricorn Zodiac.
Mararamiro aSteve Harvey:
Kazhinji anozivikanwa sa'Murume kuseri kwemadevu 'basa rakaoma raSteve Harvey pamusoro pemakore zvakamupa hupenyu hwoumbozha uye yakanaka chunk yeshanduko. Iwe unoziva here, panguva yekunyora iyi biography, iye anofungidzirwa kuti mambure akakosha angangoita madhora zana nemakumi masere emadhora Muchokwadi, imwe yeMotokari mugaraji raSteve ndeye Pearl chena Roll Rolls Royce Phantom Drophead Coupe Convertible yakatengwa sechipo kumukadzi wake, Majorie pachiitiko che160th Anniversary yake.
Kubva pamamirioni akawanda emamirioni emapeteni muChicago kuenda kuimba yeLavish muAtlanta, Georgia - Steve Harvey anga aine zvimwe zvinoshamisa kutengesa dzimba. Akakura hushe hunoshamisa neanorova mabhuku, mafirimu uye TV Shows; kunyangwe saiti yake yekufambidzana.
Untold Chokwadi Nezve Steve Harvey:
Chokwadi # 1- Zita rake harisi Chaizvo Steve
Akazvarwa saBroderick Stephen Harvey musi waNdira 17, 1957, akatumidzwa zita rekuti Highway
Patrol actor Broderick Crawford. Asi iye sezviri pachena anofarira iro rakapfupiswa vhezheni yezita rake repakati.
Chokwadi # 2- Ane mugwagwa wezita Rake
Muna 2015, mugwagwa maigara Harvey semwana, East 112th Cleveland, Ohio
akatumidzwa Steve Harvey Way.
Chokwadi # 3 Iye Akange Asisina Imba Asati Awana Kubudirira
Steve akabvuma kune People magazine kuti akapedzisira kugara kunze kwemotokari yake uye
inoratidzwa panowanikwa magasi kana mumvura yekushambira; apo akaramba achiedza kuti
tsvaga basa rakatsiga.
Chokwadi # 4- Iye Akatanga Yake Yake Kufambidzana Webhusaiti
Iye zvakare ane chikamu chinzvimbo chekufambidzana chinonzi Chakanaka, icho chinosanganisira mavhidhiyo e
iye achimhanyisa zano rake reunyanzvi.
Chokwadi # 5- Haana Kumbozviona As As Game Show Host
Steve akabvuma kuti paakatanga kukumbirwa kuitisa zvirongwa zvakasiyana-siyana zvemitambo,
hachisi chinhu chaakazviona achichiita. Nekudaro, zvakabvumiranwa kuti zimubvumire iye kuseka kwake, zvinhu zvese zvakawira munzvimbo.
Chokwadi # 6-Anogovera zuva rimwechete rekuzvarwa naMichelle Obama uye Muhammad Ali
Kugara zviroto zvake, Steve Harvey Aside kusangana uye sekutambira vanhu vanoverengeka vanozivikanwa vanogovana zuva rekuzvarwa rimwe chete neZvaifarira Michelle Obama, Muhammad Ali naBetty White pakati pevamwe. Aitawo zvakare Joel Osteen, Barack Obama nevamwe vazhinji vanosanganisira VaDonald Trump
Chokwadi # 6- Akabheja Chiremba
Muna 2006, Harvey akaburitswa pamwe neakaremekedzwa Doctorate Degree kubva
Chokwadi # 7- Kusangana naKevin Hart uye Kubata pamwe naEllen DeGeneres:
Wakanga uchiziva here kuti Steve uye Kevin Hart vayambuka nzira pamitambo yaSteve
- 'Harveys Mazana?' Steve akashamisika kuona Hart pachiratidziro se 'gamer.'
Neraki, Kevin akahwina mutambo uye akapa iyo mubairo mari kune yemhanza nhengo yevateereri. Uye zvakare, iye akambobata-pamwe show - Diki Shoti hombe na Ellen DeGeneres.
Zita rizere Broderick Stephen Harvey
Zuva rekuzvarwa 17th January 1957
Nzvimbo yekuzvarirwa Welch muWest Virginia, United States
Baba Jesse Harvey
Amai Eloise Vera Harvey
Vanun'una Terry Harvey, Ramona Harvey, Pauline Harvey
Hama Thomas Miles, Andrena Brown, El
Children Brandi Harvey, Karli Harvey, Broderick Harvey Jr., Wynton Harvey, Lori Harvey, Jason Harvey, Morgan Harvey.
zvinhu Dice Kupfura uye kubata hove
urefu 6 tsoka 2 inches
Zvino iwe unoziva nezve Steve Harvey's Biography uye Yehucheche Nyaya. Tinotarisira kuti iwe ugovana ruzivo rwako nesu. Tariro yedu ndeyekuti iwe wakawana izvi zvichinyora zvinonakidza uye zvichijekesa zvakare. Isu tinokuvimbisa iwe yakawanda biography chokwadi neepamusoro-notch kunyatso uye kurongeka kunouya mvura, huya upenye.
Ini ndinoda Steve Harvey, anosetsa, akanaka uye muKristu. Vabereki vake vakaita zvakanaka. Ndinovimba anogara aine hushamwari kune vanhu uye kwete sevamwe nyeredzi dzemamuvhi. Mwari anga akanaka kwaari uye ndinovimba kubudirira kwake hakuzoendi kumusoro wake. Anoratidzika kunge munhu akanaka kwazvo. Ndatenda Steve nezvose zvaunoita.